KUKUNDA NOKUTANGA KUTANGA MUGERMAN GERMAN, ChiGerman Easy Courses | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » German Times uye Mitsara » Chirevo cheGerman Chirongwa Chekuiswa, Nzira Yokugadzira Mutsara wechiGermany
GERMAN SENTENCE INSTALLATION, GERMAN SENTENCE SAMPLES, GERMAN CUFFS
Kuchenjerera: Kuti uchinzwisisa zvakakwana izvi uye nyaya dzinokurukurwa gare gare, unofanira kuziva mutauro weTrama Grammar zvakakwana.
Kana iwe uine ruzivo pamusoro pemutongo uye zvayo mumutauro weTurkey, tapota enda nokukurumidza.
SIMPLE SINGLE INSTALLATION
Tinoona mutsara unosanganisira nyaya uye chirevo semutsara usina nyore.
Kutongerwa zvivakwa zvakajeka zvirevo zvechirevo.
Shanduro-chiito chinowirirana chinokosha mumitauro yakarurama uye inobatsira.
Kana mutongo uri mumutauro usingabvumirwi neshoko, mutongo wacho unoora uye hauna maturo.
Imi varume muri pano.
Mumitauro iyi, zviito hazvibvumirwi maererano nehurukuro uye nyaya-chokwadi-chisingaiti chakasimuka.
Somuenzaniso, maererano nehurukuro, "Ini ndichaenda" kana ir Ivo vachaenda "mutongo maererano nehurukuro.
Zvakanaka, sezvo mumutsetse, nyaya uye chirevo chekufananidzira zvinofanira kugara zvichienderana, saka tinokwanisa kuwana pfungwa yehurukuro yemutsara wekutarisa mutsara wechirevo.
Funga nezvemashoko mashomanana ari pamusoro apa.
Muchirevo "ndiri kuuya, gibi munhu (nyaya) anoita basa iri nyore kunzwisisa, uye munhu wekutanga" I).
Nyaya yemutsara wekuti "Wakanyora" ndeye "iwe n sezvazvinonzwisisika.
Nyaya yemutongo ır Vachanyora üm "ivo".
Nyaya yemutsara wekuti "Uri kuuya" uri mauri ".
Zvechokwadi, nokutarisa mhedziso yemutongo, tinoziva nyaya yemutongo iwoyo.
Icho chiito chinongotiudza nezvemusoro wemutsara here?
Vhesi dzinotipawo ruzivo pamusoro pemusoro wemutsara, nguva iyo basa rainge raitwa, denga uye mamiriro emutsara.
Vhesi anoumba chirevo chechirevo uye zviito zvezviito zvinonzi zita rechiito chisinganzwisisiki.
MuTurkey, maito echiito-to-be-or-be.
MuchiGermany, izvi zvakasimbiswa pane dzimwe nguva-dzimwe nguva.
Iye zvino, kuti tinzwisise zviri nani mamiriro ezvinhu, ngatienzanisei zviito mumitauro miviri.
KUFUNGA IZVI: ChiGerman chaiva chimiro cheLecturing Pattern
spielen ndiro chiito chekutamba chiito muchiTurkey.
Sezvo zvinogona kuonekwa mumazwi ekutanga muchiGermany mastar attachment ndiyo yakawanda, muTurkey is mak.
Kana chiito chiwedzerwa kumazwi, shoko rakasara rinotorwa sechiito chechiito.
Paunounza munhu kana nguva yekubatanidza kushoko rechiito pamwe nekureva zviito zvechiito uye neshoko rinosara munhu, nguva, nezvimwe zvinounzwa kuzvibatanidzwa.Ngatitsanangurei nemuenzaniso.
Tiri kukanda chidimbu chechiito kuti tiverenge uye tine shoko reve museve bir. Regai tauye shoko uye kusungirirwa kwenguva kune shoko iri. Ngatitorei chibatanidza chimwechete uye ikozvino kusungirirwa kwenguva.
verenga - um
Zvino ngatitsanangurirei zvinyorwa zvatinounza muchiito ichi.
yor: ikozvino nguva yekubatanidza
Um: 1. mumwe munhu akabatanidzwa
Iye zvino ngatiitei zvishoma shots:
VERENGA - YOR - SUN
VERENGA - DU - N
VERENGA - YOR - UZ
VERENGA - DU - K
Iye zvino ngatitarisei pfungwa pano. Ngatitarisei zviito zvatinoverenga nekuverenga.
Vose vari 1. Sei vaine zvakasiyana-siyana zvekubatana, kunyange zvazvo zvizhinji?
Iyi mamiriro akaenzana nechimiro chegiramita uye nguva dzakasiyana-siyana dzakashandiswa.
Sezvo mumutauro wedu muchiGermany, chiito chekupindira chinobviswa uye chiito chinowedzera kumudzi.
Zvino ngatitange kupfura muGermany:
Isu tinotora zvisinganzwisisiki kupinda nekudzoka lerne shoko rinoramba.
Zvino izvi lerne Ngatitorei munhu uye nguva yekubatana. Somuenzaniso 1. Ngatitorei munhu mumwechete uye iye zvino mazvikwata zvenguva.
Lern - e: Kudzidza - Ndinofunga - um
Sezvo zvinogona kuonekwa chete nguva yemazuva ano uye nguva ino uye 1. chirevo chimwechete chomunhu.
Lern - t: Kudzidza
Lern - te: Kudzidza
Tichapa zviito zvishoma zvezviri pamusoro.
Zvino, regai tinyatsofunga pane imwe pfungwa.
Sezvatakaona, takabvisa zviito zvezviito uye zviito chaiwo zvechiito chinosara nekuwedzera chiito chaiwo.
Kana mudzi wechiito chisingachinje kana chiito chiri kuiswa mufananidzo, zvino izwi iri rinonzi Regular Verb.
Asi kana chiito ichi chichichinja mudzi wechiito, izwi iri rinonzi Irregular Verb.
Nguva dzose zviito dzimwe nguva zvinonzi mazita asina simba, zvisiri zvinyorwa mune dzimwe nzvimbo zviito zvakasimba.
Saka tinoziva sei kuti mudzi wechiito unogona kuchinja?
Kuti ugone kupindura mubvunzo uyu, unofanirwa kuchengeta nepamusoro dhese dzese dzisiri.
Panguva ino unogona kutanga nekungwarira zvakanyanya kushandiswa muupenyu hwezuva nezuva.
Asi ngatione kuti hatina chokusarudza kunze kwekuyeuchidza zviito izvi uye shots!
CHIMWE CHINHU CHINOBATSIRA?
MuchiGermany kune mutsara anobatsira mumutsetse.Iyo pane mazita echiito anobatsira mumutsara. dzinofanira kushandiswa neshoko rechiito muchirevo chavanokwanisa kuchinja nguva kana kuti chinangwa chechiito chaicho.
Aya mazano anobatsira pamusoro apa anogonawo kushandiswa sechirevo chechirevo.
Kana ichishandiswa sechinhu chiito chekare, ivo vane zvinoreva uye vanogona kushandiswa voga.
Pano tinopa ruzivo rwechirama kuti tibatsire mamwe mazano anokosha.
Muzvidzidzo zvinotevera, ticharamba tichirondedzera mitsara yemitemo sezvakaita shanduro yegiramatically, kubva pamagadziro emutauro ari nyore kusvika kumatongo akaoma kunzwisisa.
Tinokudai iwe wose kubudirira Hep
German Shona Words (tsamba M)
TAGS: 10. kirasi german sentences, 10. kirasi german nyaya inotaura, 9. German in German, 9. kirasi german nyaya inotaura, chirevo chechi German chivako, mutambo wechiGermany, mutongo wechiGerman nzira yekuisa, chirevo chechi German chimiro, chirevo chechi German, chi German chirevo chekuita sei
Iwe wandiudza ine tsanangudzo yakajeka, iri nyore uye yakanaka, wangu mudiwa wangu. Utano muhutano hwako
Ona Fatma's Full Profile akati:
06 January 2015, 22: 42
manheru akanaka ndinofanira kudzidza chiJerman asi ini handizivi kuti ndingadzidza sei zviri nyore iyi. Handizivi kuti ndotanga kupi uye kuti ndotanga sei inzwi.
22 January 2015, 18: 53
Iwe unogona kundibatsira here kuti ndiite mazwi aya mune zvakakanganiswa? kuvonga
Bata Murat zvakananga akati:
Nguva shoma, asi ini ndichapa mhinduro. Zvichida vamwe vanoda kubatsirwa.
Ndine urombo kuti ndakanganisa.
beyza sky akati:
Hapana peji rinotsanangura chiGerman zviri nani
Ndinoti ndiri kutanga kunzwisisa zvese zvakanakisisa zvandiri kutarisa mubvunzo wandapedza nyaya yacho inoramba ichinyanya kuwedzerwa uye kuwedzera svondo